Akụkọ Bible: Rehab Ezobe Ndị Nledo - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
NDỊ ikom ndị a nọ ná nsogbu. Ha aghaghị ịgbapụ, ma ọ bụghị ya, a ga-egbu ha. Ha bụ ndị Izrel bịara nledo. Nwaanyị a nke na-enyere ha aka bụ Rehab. Rehab bi n’ebe a n’ụlọ dị ná mgbidi obodo Jeriko. Ka anyị chọpụta ihe mere ndị ikom ndị a ji nọrọ ná nsogbu.
Ụmụ Izrel ejikerewo ịgabiga Osimiri Jọdan iji baa n’ala Kenan. Tupu ha abaa, Jọshụa zipụrụ ndị nledo abụọ ahụ. Ọ sịrị ha: ‘Gaanụ lee ala ahụ na obodo Jeriko.’
Mgbe ndị nledo ahụ ruru Jeriko, ha jere n’ụlọ Rehab. Ma otu onye gwara eze Jeriko, sị: ‘Ndị ikom abụọ bụ́ ndị Izrel batara ebe a n’abalị a iledo ala anyị.’ Mgbe ọ nụrụ nke a, eze zigara ndị ikom ijekwuru Rehab, ha ji olu ike gwa ya, sị: ‘Kpọpụta ndị ikom ahụ nọ n’ụlọ gị!’ Ma Rehab zoro ha n’uko ụlọ ya. O wee sị ha: ‘E nwere ndị ikom bịara n’ụlọ m, ma amaghị m ebe ha si bịa. Ha lara mgbe chi na-eji, tupu e mechie ọnụ ụzọ ámá. Ọ bụrụ na unu emee ọsọ ọsọ, unu pụrụ ịnwụde ha!’ Ha wee malite ịchụ ha.
Mgbe ha pụwara, Rehab wee were ọsọ gbaga n’uko ụlọ ahụ. O wee sị ndị nledo ahụ: ‘Ama m na Jehova ga-enye unu ala nke a. Anyị nụrụ otú o si mee ka Osimiri Uhie takọọ mgbe unu na-ahapụ Ijipt, na otú unu si gbuo eze Saịhọn na eze Ọg. Egosiri m unu obiọma, n’ihi ya, kwenụ m nkwa na unu ga-emere m ebere. Zọpụtanụ nne m na nna m na ụmụnne m ndị ikom na ndị inyom.’
Ndị nledo ahụ kwere nkwa na ha ga-eme otú ahụ, ma Rehab aghaghị ime otu ihe. Ha sịrị ya: ‘Were eriri uhie nke a, kee ya na windo gị, gị na ndị gị niile nọkọtakwa n’ime ụlọ gị. Mgbe anyị dum bịaghachiri iweghara Jeriko, anyị ga-ahụ eriri a na windo gị, anyị agaghịkwa egbu mmadụ n’ụlọ gị.’ Mgbe ndị nledo ahụ laghachikwuuru Jọshụa, ha kọọrọ ya ihe niile merenụ.
Joshua 2:1-24; Ndị Hibru 11:31.
Ebee ka Rehab bi?
Ole ndị bụ ndị ikom abụọ a nọ na foto a, gịnịkwa ka ha gara ime na Jeriko?
Gịnị ka eze Jeriko nyere Rehab iwu ka o mee, gịnịkwa ka Rehab zara ya?
Olee otú Rehab si nyere ndị ikom abụọ ahụ aka, gịnịkwa ka ọ rịọrọ ha ka ha meere ya?
Gịnị ka ndị nledo abụọ ahụ kwere Rehab ná nkwa?
Gụọ Joshua 2:1-24.
Olee otú nkwa Jehova nke e dekọrọ n’Ọpụpụ 23:28 si mezuo mgbe ndị Izrel bịara ibuso Jeriko agha? (Josh. 2:9-11)
Gụọ Ndị Hibru 11:31
Olee otú akụkọ banyere Rehab si egosi mkpa ọ dị inwe okwukwe? (Rom 1:17; Hib. 10:39; Jems 2:25)